विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ लाख ८३ हजार नाघ्यो ! - Sagarmatha Online News Portal
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ लाख ८३ हजार नाघ्यो !
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७ लाख ८३ हजार ४ सय ८ जना पुगेको छ ।
हालसम्म विश्वभरका २ करोड २२ लाख ९४ हजार ३ सय ५३ जनामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । हालसम्म विश्वभरबाट १ करोड ५० लाख ३७ हजार १ सय ६६ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । भने संक्रमितमध्ये ६१ हजार ९ सय ४३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटर्सको तथ्यांकले देखाएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको असर देखिएको छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा १ लाख ७५ हजार १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । बितेको २४ घण्टामा ४३ हजार १ सय ४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ५६ लाख ५५ हजार ७९ पुगेको छ । हालसम्म ३० लाख १० हजार ३ सय ८८ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये १६ हजार ९ सय ७४ जनाको अवस्था गम्भीर छ । त्यस्तै बितेको २४ घण्टामा मात्र १ हजार ३ सय ३ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै ब्राजिलमा कुल संक्रमित संख्या ३४ लाख ६३ हजार २ सय ३५ पुगेको छ । हालसम्म ब्राजिलमा कोरोनाको कारण १ लाख १० हजार १९ जनाको ज्यान गएको छ । २५ लाख ५४ हजार १ सय ७९ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये ८ हजार ३ सय १८ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५३ हजार १४ पुगेको छ । बितेको २४ घण्टामा ६५ हजार २२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या २७ लाख ६६ हजार ६ सय २६ पुगेको छ । हालसम्म २० लाख ३६ हजार ७ सय ३ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । त्यस्तै बितेको २४ घण्टामा मात्र कोरोनाको कारण १ हजार ८९ जनाको ज्यान गएको र संक्रमित मध्ये ८ हजार ९ सय ४४ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
त्यस्तै रसियामा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ हजार ८ सय ७२ पुगेको छ । बितेको २४ घण्टामा ४ हजार ७ सय ४८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको र १ सय ३२ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । हालसम्म ९ लाख ३२ हजार ४ सय ९३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये ७ लाख ४२ हजार ६ सय २८ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । संक्रमितमध्ये २ हजार ३ सय जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ हजार २ सय ६४ पुगेको छ । हालसम्म ५ लाख ९२ हजार १ सय ४४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितमध्ये ५ सय ३९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र ४ लाख ८५ हजार ४ सय ६८ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।